Posted by Scott on Aug 28, 2010 in Myanma News |2comments
အထက်က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကလည်း သူတို့နေရာရရှိရေးကိုသာ ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီတော့ အကျင့်ပျက်ဝန်းထမ်းတွေကလည်း အချိန်ရှိခိုက် ရသလောက်ဝိုက်ကြတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါပြီ..။ စီးပွားရေးသမားတွေက ပြည်နာမှ ငွေရှာလို့ကောင်းသတဲ့။ ဌါနဆိုင်ရာက၀န်ထမ်းတွေအတွက်တော့ အကြီးအကဲတွေက နေရာအတွက်မျက်ဖြူစိုက်နေချိန်မှာ အောက်ကကောင်တွေကလည်း ငွေရရှိရေးကို လက်တစ်ဆုံးနှိုက်ပြီး ၀ိုက်နေကြတဲ့သဘောပါဗျာ..။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေလို့သာ ဆိုလိုက်ပါရစေ…။
Message တစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူး . . . ဘယ်လိုမျိုးလဲ ၊ ? ? ?